Akụkọ - Na Eprel 26, emere ememme ngosi ngosi nke ndị okenye nke Shanghai nke 2019 na hailọ Ọrụ Mgbakọ na Mgbakọ Mba nke Shanghai!
Afọ a buru ibu, yana ihe karịrị ụlọ ọrụ 300 sexy na-ekere òkè, na ala nke atọ nke ụlọ ngosi ihe nkiri ahụ edozila nke ọma! A na-ahazi ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ na mpaghara ngosi mba ofesi iji belata oghere dị n'etiti ndị na-ege ntị na ụdị mba ụwa.
Ndị na-egosi ihe eji arụ ụlọ bụ ụlọ ọrụ akụrụngwa, ngwa ahịa ezinụlọ yana mmanụ na-agba agba, enwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ nwa bebi na-abịa ihe ngosi ahụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ngwaahịa dịka SM na bundle, na ụdị ịchọ mma nke ụlọ ntu ahụ dị oke njedebe!
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ọkachamara na Shanghai Adult Exhibition na 2018 ruru ndekọ, na-eru 8,321, gụnyere 6,191 ndị ọbịa ụlọ na ndị njem 2,130 ndị mba ọzọ. "Akwa ọkachamara" abụwo mgbe mgbe nkà ihe ọmụma nke Shanghai International Adult Products Ngosi. Na 2018, ihe ngosi ahụ guzobere mpaghara ngosi mba ụwa ma nata nzaghachi dị elu site na ọtụtụ ụdị ngwaahịa ndị okenye a ma ama, nke ọ bụghị naanị na-akwalite mmekọrịta miri emi n'etiti ụlọ ọrụ ndị okenye na ndị si mba ọzọ Ọ na-enyekwa ngwaahịa ndị ka elu maka ndị ọbịa ihe ngosi.
Na 2019, na Shanghai Adult Ngosi ga-anọgide na-akwado "mesiri ike na exhibitor mkpa, na-akwanyere ndị na-azụ aro 'ịnọgide na-amụba ụlọ na mba n'ihu ọha mgbalị, na-agba mbọ na-agba ndị ọzọ mba ụdị isonye na Shanghai na-enye ndị ọzọ àgwà ngwaahịa maka ndị na-azụ ụlọ; N'otu oge ahụ, anyị ga-eme ike anyị niile ịkpọ ndị na-azụ ahịa ụwa ka ha bịa Shanghai maka ngosi ahụ ma nyekwa ndị ahịa kachasị mma maka ndị na-eme ihe ngosi.
Nso nke ngosi:
Ngwa ndị okenye, uwe nwoke na nwanyị, swiiti mmekọahụ, ngwaahịa SM, mmanụ mmanu, disinfectants, lubricants, sprays, ngwa ọrụ mmezi nke mmekọahụ, igbu oge mmiri, ngwaahịa mmiri ara ehi mara mma;
Mmekọahụ na-edozi nri na-edozi ahụ, ngwaahịa ọgwụ ọgwụgwọ mara mma, ahụike ọgwụ na ụlọ ọgwụ mara mma, nyocha afọ ime na itinye aka, ngwaahịa ngwaọrụ ọgwụ;
Kondom, mkpụrụ ọgwụ ọmụmụ, ngwaọrụ ọmụmụ;
Post oge: Apr-27-2020
G-Abụọ Vibrators, Ultmụaka Mmekọahụ nke Ndị okenye, Silibọn ndị ji ya arụ ọrụ, Clitoral Vibrator, oke oyibo, Sexmụ nwanyị Sexmụaka Sexmụaka,